को को बन्दैछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीहरु ?
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागि हुँने मन्त्री, उपसभामुख र विभिन्न संसदीय जिम्मेवारीमा जाने सांसदहरू सबैजसो नयाँ अनुहारका हुने भएका छन् । देउवा सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकले ६ मन्त्री पाउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा रिक्त रहेको उपसभामुख पद पनि सोही दलले पाउने सहमति भएको दाबी गरिएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट हालसम्म मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएका नाममध्ये विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, डा. खिमलाल देवकोटा, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, निरादेवी जैरु अग्रपंक्तिमा छन् । उनीहरु मध्ये एक जना उपसभामुख बन्नेछन् । उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन् ।
नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएपछि संसदीय दलको नेता, राष्ट्रिय सभा दलको नेता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक गरी ६ जना सांसदले विभिन्न जिम्मेवारी पाउनेछन् । यसरी एकीकृत समाजवादीले सरकारमा ६, संसदीय जिम्मेवारीमा ६ र उपसभामुख एक गरी १३ सांसदले नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउने भएका छन् । त्यसमध्ये संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष नेपाल आफै जाने भएका कारण बाँकी चार पदमा छनोट गरिने छ । यसबाहेक विभिन्न संसदीय समितिका सभापति हेरफेर हुँदा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा तीनवटा संसदीय समितिको सभापति पाउने पनि सम्भावना छ । राजधानीबाट
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १२, २०७८, ०७:२९:००